जेठ पाँचसम्म लकडाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लकडाउन लम्बिएसंगै काठमाण्डौमा पनि लागु भयो नयाँ नियम, – Nepal Insider
लोडसेडिङ मैले ह’टाएँ, जस कुलमान र जनार्दनले लिए : ऊर्जामन्त्री रायमाझी
सिङ्गो गाउँ नै शो’कमा डु’ब्यो, कन्याम घुमेर फर्किदै गर्दा मोटरसाइकल दु’र्घटनामा दुईको मृ’त्यु
ओच्छ्यानमा राखिएको मोबाइल पड्कियो, १४ वर्षीया किशोरीको मृत्यु
१० गते नेपाल बन्दको घोषणा
बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने,‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई’ भिडियोसहित(भिडियोसहित)
खुसिको खबर: अब दुई श्रीमती बिहे गर्नेलाई सरकारले भत्ता दिने !
स्वेता खड्काको भव्य बिहे भोज, सिउँदोमा सिन्दुरले सजिएर श्रीमानको हात समाउदै आउँदा सबैलाई लोभ्याईन
मुख्य पृष्ठ /समाचार/जेठ पाँचसम्म लकडाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लकडाउन लम्बिएसंगै काठमाण्डौमा पनि लागु भयो नयाँ नियम,
जेठ पाँचसम्म लकडाउन थप्ने सरकारको निर्णय, लकडाउन लम्बिएसंगै काठमाण्डौमा पनि लागु भयो नयाँ नियम,
काठमाडौँ – सरकारले जारी लकडाउनलाई जेठ पाँच गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेठ पाँच गतेसम्म लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो पटक सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समय वैशाख २५ गते सकिँदैछ । सरकारले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान मे १५ अर्थात् जेठ २ गतेसम्म बन्द गर्ने यस अगाडि नै निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले पछिल्लोपटक थपेको १० दिने लकडाउन बिहीबार अर्थात वैशाख २५ गते सकिदै छ। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको विश्लेषण गर्दै मंगलबार बसेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउन थप्‍न सुझाव दिएको थियो।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकमा संक्रमण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको २३ औं बैठकमा कृषि र उद्योग क्षेत्रका कामलाई मापदण्ड अनुसार निरन्तरता दिँदै कोरोना नियन्त्रणमा अहिले भएका सबै प्रयासलाई यथावत राख्दै संक्रमण शून्यमा झार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउनको अवधि भोलि सकिँदै थियो। लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण भने बढिरहेको छ। लकडाउन सुरू हुँदा नेपालमा २ जनामात्र कोरोना संक्रमित थिए भने अहिले ८२ जना पुगेका छन्।
त्यस्तै दैनिक उपभोग्य सामग्री र स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी जोडिएका सवारीबाहेक अब उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ गरिएको छ । यसअघि पास बनाएपछि निर्वाधरुपमा सवारी भित्रने गरेको थियो । अब भने पासबाहक गाडीलाई समेत धमाधम फर्काउन थालिएको छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले पास भएकालाई पनि अब अत्यावश्यकबाहेक प्रवेश रोकिएको बताउनुभयो । “दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग र स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका सवारी आउन पाउँछन्, त्यसबाहेक पास लिएर आए पनि सवारी भित्रिन पूर्ण निशेष छ ।”
ब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?
विभिन्न नाकाबाट अहिले उपत्यका एक हजार ५०० हाराहारीमा सवारी भित्रिने गरेका छन् । त्यसमा झण्डै ४०० सवारी पास बोकेर विभिन्न काममा आउने गरेको प्रहरीको अभिलेख छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सवारीसमेत बढेको छ । ती गाडीमा चालक सहचालक गरी दुईदेखि तीनजना आउने गरेका छन् । त्यसरी हेर्दा झण्डै चार हजार हाराहारीमा मानिस दैनिक उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । अत्यावश्यक सावारीमा आएकाहरु सामान अनलोड गरेर बाहिरिने भए पनि अन्य व्यक्तिहरु बाहिरिने गर्दैनन् । त्यसैले पनि कडाइ गरिएको हो ।
त्यस्तै सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि केही खुकुलो बनाउने तयारीका साथ आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ । लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको, श्रमिक तथा उद्योगीलाई समेत ठूलो मार परेकाले केही खुकुलो बनाउने तयारी थालेको हो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा केही खुकुलो बनाउने र विभिन्न तीन तहमा विभाजन गरी आवश्यक निर्णयको तयारीमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
छोरीको बीमा गराउनेलाई सरकारले तीन महिना नि ःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने
ऋषिले गरे रवि लामिछाने रिहा हुने खुलासा ! भोलि म रबिलाई फुलमाला लगाउछु……(भिडियो सहित)
अब कालापानी मात्रै होइन uदार्जिलिङदेखि काँगडासम्म भुभाग नेपालको हो भारतले फिर्ता दिनुपर्छ
विदेशमा अलपत्र परेका ८० हजार भन्दा बढीलाई सरकारले स्वदेश फर्कायो
नेपालमा को’रोनाको उग्ररुप : पूर्वमा विराटनगरपछि इटहरी र धरानमा सं’क्रमण तीव्र
19 seconds अघि